cunug yar oo qaba 4lugood.............
Subject: cunug yar oo qaba 4lugood............. Thu Mar 25, 2010 5:15 pm
Ayadoon lala yaabeen waxyaabaha cajaa'ibta leh ee ka dhaca dunada ayaa misna waxaa jira in maalin walba ay ka dhacaan aduunkaan aynu ku noolnahay wax kaa sii yaabinayo kaa oo keena in wax badan ay kuu soo kordhiso marka aad maqasho ama aad aragto.
Waxaa arin mucjiso leh ay noqotay kadib dhawaan uu ku dhashay cisbitaal ku yaala magaalada Xalib ee wadanka Suuriya cunug afar lu goodleh,kaas oo si aan dhibaato lahayn uga yimid minka hooyadiis,iyadoona ay dhakhaatiirtii ka umulinaysay hooyadiis ay si aan dhib lahayn u soo saareen cunugaasi.
Axmed Sheikh Maamulaha cisbitaalka caruurta ee magaalada Xalib ee Suuriya ayaa sheegay in uu cunugaasi ahaa markii uu abuurka ku jiray labo mataana ah,laakiinse uu is badalay bartamaha xiliga uu ku jiray heerarka koriinka ee Minka hooyada.
Mucjisada Ilaahay, Wiilkii yaraa ee ku dhashay 4ta Lug ....... Dhakhtar qaabilsan qaliinka oo lagu magacaabo Muniir Caruuq ayaa isguna sheegay in uu cunagani yahay mataano aan dhamystirneen,kaasoo si Naadir ah loogu arko caalamka ilmo ku dhasha xaalada mataano aan dhamaystirmin.
Maamulka cisbitaalka uu ku dhashay cugani ayaa wada xanaanayn joogta ah oo ay sii nayaan cunuga iyo hooyada dhashay.
Sidoo kale, Dhakhaatiiru waxaa kaloo ay sheegeen in aanay weli kala cadayn Karin in uu ilmahan yahay gabar ama wiil,laakiinse ay baaritaano ay ku samaynayaan cunugaasi kadib ay kala cadayn doonaan.
Dhanka kale, Arintan Mucjisada leh ayaa si dhifdhif ah uga dhacda caalamka iyadoona aan inta badan lagu arkin dhacdooyinka caalamka ee caruurta dhalata,labo mataana ah oo ku xumaada inta ay ku jiraan minka hooyada kadibna isu badala sedan oo kale.
Subject: Re: cunug yar oo qaba 4lugood............. Wed Mar 31, 2010 2:13 am
walaahi walaal waa mucjiso zaaid u yaab badan maa shaa alaah